नेयमारलाई रियल मड्रिडले भित्र्याउने निश्चित, स्वागतकाे लागि भव्य तयारी ! « Online Tv Nepal
नेयमारलाई रियल मड्रिडले भित्र्याउने निश्चित, स्वागतकाे लागि भव्य तयारी !
Published :6June, 2018 12:39 pm
स्पेनिस महारथी रियल मड्रिडले पेरिस सेन्ट जर्मेनका स्टार स्ट्राइकर नेयमारलाई स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ । केही महिना यता नेयमारलाई भित्र्त्याउने प्रयास गरेको रियलले जुन सुकै मूल्यमा पनि नेयमारलाई क्लबमा ल्याइ छाड्ने तयारी गरेको स्पेनिस पत्रिका एसले दावी गरेको छ ।
रियलका खेलाडी समेत अर्को सिजन नेयमारसँग खेल्नका लागि उत्साहि भएको समचारमा उल्लेख छ । रियलका क्याप्टेन रामोसले भनेका छन्, ‘मलाई सबैभन्दा राम्रो नेयमार रियलमा हुँदा लाग्नेछ ।’ अर्का खेलाडी डानी कार्जभालले नेयमार एक महान खेलाडी भएको बताएका छन् । नेयमारका ब्राजिलियन टिममेट मार्सेलो र कासिमिरोले भनेका छन्, ‘सर्वोकृष्ट खेलाडीले रियलबाट खेल्न जरुरी छ । उनले एक दिन त्यो गर्नेछन् ।’
कासिमिरोले नेयमारका लागि रियलको ढोका सँधै खुला रहेको बताएका छन् । लुका मड्रिकले नेयमारलाई गत आइतबार ब्राजिल र क्रोसियाबीचको खेल पछि जर्सी साट्दै रियल आउन आग्रह गरेका छन् । नेयमार गत सिजन बार्सिलोनाबाट १९८ मिलियन पाउण्डमा पिएसजी गएका थिए । पछिल्लो समय पिएजीका फवार्ड लिग वान छोडेर पुनः ला लिगामा फर्कने दावी गरिएको छ ।